Shuruud lagu xiray Wadahadalka Taliban
Hogaamiyeyaasha Afghanistan ayaa shuruud ku xiray sii wadida wada hadalka Kooxda Taliban
Hogaamiyeyaasha Afganistan ayaa isku raacay in lagu xiro shuruudo cusub sii wadida wada hadalada ay kula jiraan kooxda Taliban, iyagoo sheegay in kooxda ay tahay ineey meel lagala soo xiriiro ka sameeyaan mid ka mid ah sadex goobood, isla markaana ay joojiyaan gacan ka hadalka.
Xafiiska madaxweeynaha Afganistan Xamiid Karzai ayaa ayaa sheegay in uu saraakiil sar sare oo dowladda uu kala xaajooday Khamiistii shalay sidii loo soo nooleeyn lahaa geedi socodkii nadda ee hakadka galay ee ay dowladu la laheeyn – mujaahidiintii hore ee dalkaasi ee la dagaalamay – midoowgiii Sofiyeeti , taliyeyaal ciidan iyo shaqsiyaad dhinaca diinta muxtarim ka ah dalkaasi.
War ka soo baxay qasriga madaxtooyada ayaa lagu sheegay in hogaamiyeyaasha Afganstan ay isku raaceen sida laga yeelayo wada xaajoodyada mustaqbalka lala galayo kooxaha wax iska caabinta, iyadoo firkad ahaan la soo jeediyay ineey ka dhacaan xafiis rasmi ah oo ay taalibaan ku leedahay gudaha Afganistan.
Saraakiishu waxeey sheegeen in hadii ay xaaladdu suurtagelin weeyso xafiis noocaasi ah oo ay taalibaan leedahay ineey aqbali doonaan in wada hadaladu ay ka dhacaan Sacuudiga ama Turkiga.
Waxaa kalooy shuruud ka dhigeen in la joojiyo dagaalka iyo rabashadaha ka dhanka ah dad reer afganistan ka hor inta aysan bilaabanin wada hadalada.
Dowladda Afganistan ayaa adkeeysay shuruudaha wada xaajoodka bilihii u dambeeyay, ka dib markii rag iska dhigayay ineey ka tirsanyihiin dadka wada xaajoodka uga qeeybgalayaan ay noqdeen kuwo been ah.
Nin sheeganayay inuu ahaa wada xaajoode Talibaan ka socda ayaa weerar ismiidaamin ah bishii sebtember ku qaarajiyay madaxii Golaha nabadgelyada ee Dowladda Afganistan Burhanudiin Rabaani.